Ukukhiqizwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zoshizi ezinjengoshizi onzima, ushizi othambile kanye ne-curd, okwenziwe ngohlobo lobisi oluhlukahlukene (isb. Inkomo, imbuzi, imvu, inyathi, ubisi lwekamela njll) kungathuthukiswa kahle nge-sonication. Ukusetshenziswa kwe-high-intensity ultrasound kusheshisa i-homogenization, ukuvutshelwa, nokuvuthwa, kuthuthukisa ukuqina kwamagciwane futhi kukhombisa imiphumela emihle enanini lezakhi nokuthungwa.
I-High-Intensity Ultrasound Ithuthukisa Ukukhiqizwa Koshizi
Ukucubungula ukudla kwe-Ultrasonic ubuchwepheshe obusungulwe kahle bokuthuthukisa i-homogenization yobisi nokuvutshelwa ekukhiqizeni ushizi. Ngaphezu kwalokho, i-sonication ihambisana nokwelashwa okuncane kokushisa – eyaziwa ngokuthi i-thermo-sonication – isetshenziswa njengokunye esikhundleni sokunamathisela kwendabuko okususelwa ekushiseni, ngaleyo ndlela kuvimbele izakhamzimba ezinjengamavithamini, ama-amino acid kanye namafutha ngokumelene nokuwohloka okushisayo. Ukukhiqizwa koshizi kusetshenziswa ubisi noma i-whey kungakhuliswa kakhulu futhi kuthuthukiswe ngokusetshenziswa kwe-high-intensity, low-frequency ultrasound.
Izinzuzo Zokukhiqizwa Koshizi we-Ultrasonic
Ukukhiqizwa koshizi okusheshisiwe
Ikhwalithi yoshizi ethuthukisiwe
Isivuno sikashizi esiphezulu
Isikhathi esincishisiwe sokuvutshelwa
Ilula futhi iphephile ukusebenzisa
I-Ultrasonication isetshenziswe ngempumelelo ezinqubweni zokukhiqiza ushizi kusuka kubisi lwezinkomo / lwezinkomo, ubisi lwezimvu, ubisi lwenyathi, ubisi lwembuzi, ubisi lwekamela nobisi lwehhashi.
Ukukhiqizwa koshizi okwenziwe nge-Ultrasonically kungasetshenziselwa izinhlobo ezahlukahlukene zeshizi kubandakanya ushizi we-cheddar, ushizi we-feta, ushizi kakhilimu, ushizi we-curd, ushizi we-panela waseMexico, ushizi othambile wase-Hispanic, nolunye ushizi.
Imiphumela ye-low-frequency, high-intensity ultrasound ebisi ekukhiqizeni ushizi ifaka phakathi ukwanda kwamandla wejel nobulukhuni be-gel, ukusheshisa ukwakheka kwejel, ukukhuphuka kwendawo ethile, ukunciphisa ukuqina kwe-curd, usayizi omncane futhi oyizinhlayiyana ukwabiwa kwama-globules amafutha kanye namandla amakhulu okubamba amanzi.
I-Ultrasonically yanda i-homogeneity nokuningi ukusatshalaliswa kwama-globules amafutha obisi kuthuthukisa ikhwalithi yoshizi, futhi. Isibonelo, izakhiwo ezisikiwe zobisi lwembuzi ezine-renin zikhombise ngemuva kwe-10 min ultrasonication inethiwekhi ye-denser enqamulelwe inethiwekhi, okuholela ekwakhiweni okukodwa okufana kakhulu okunama-pores amaningi. Kuyaphawuleka ukuthi la ma-pores ayemancane kakhulu kunalawo asekhanda lobisi ngaphandle kwe-sonication. Lokhu kuphakamisa ukuthi uketshezi lobisi lwembuzi oluphathwe ngamandla e-ultrasound kukhombisa ukuqina okukhulu, ukubhalisa amanani we-G'max (inani eliphakeme lemoduli yokugcina) ephakeme kune-100 Pa, iphakeme kakhulu kunaleyo ebikiwe obisini lwenkomo. Umphumela ofanayo ubonwe ekunamatheleni (amandla wezibopho zangaphakathi zesampula). Ngakho-ke, kungacatshangwa ukuthi i-high-intensity ultrasound ikhuthaza ukuhlangana okuqinile phakathi kwezingxenye zobisi, kuthuthukise izakhiwo zokubeka. (bheka uCarrillo-Lopez et al. 2021)
Ukwelashwa okuphakathi kwe-Ultrasonic kobisi lokukhiqizwa koshizi.
Imiphumela ye-Ultrasonic Ekukhiqizeni Ushizi Ohlukahlukene
Imiphumela yocwaningo lwe-high-intensity ultrasound ngesikhathi sokucubungula ubisi nokwenziwa koshizi icwaningwe kakhulu.
Ukwenyuka koshizi: I-sonication yobisi oluhlaza olusha ne-ultrasonicator UP400S ngesikhathi sokukhiqizwa koshizi we-panela, kuholele ekukhiqizweni koshizi okwandisiwe (%), yize kunokwanda kwe-exudate. Amathoni aphuzi nombala oshizi kukhuthazwa yi-HIU nge-10 min. Kepha hhayi izixhumanisi zombala we-L *, a *, noma C *. i-pH inyuke isuka ku-6.6 yaya ku-6.74 ngemuva kwe-5 min ye-ultrasonication kepha yehliswe ku-10 min. (bheka uCarrillo-Lopez et al., 2020)
Ukuthungwa koshizi okuthuthukisiwe: Mayelana nezifundo ezenziwa ngoshizi, uBermúdez-Aguirre noBarbosa-Cánovas babike ukuthi ushizi omusha otholakala obisini oluphathwe nge-thermosonication (kusetshenziswa i-Hielscher UP400S – I-400 W, i-24 kHz, i-63 ° C, i-30 min) ibithambile futhi ibukeka kabi kunoshizi kusuka ebisini lokulawula (ngaphandle kwe-thermosonication). Lezo zici zaholela ekubeni ushizi olulula ukuqhekeka, okuyisici esithandekayo soshizi omusha. Laba babhali bachaze lokhu kuziphatha ngokuqaphela ukuthi ukwakheka okuncane koshizi wobisi we-thermo-sonicated kuveze ukwakheka okufana kakhulu uma kuqhathaniswa noshizi wobisi olungasetshenziswanga. Ngaphezu kwalokho, baqaphela ukuthi i-thermosonication ithuthukise i-homogenization yamaprotheni namafutha nokwanda kokugcinwa kwama-molecule wamanzi ku-matrix. Ngakho-ke, kungacatshangwa ukuthi i-HIU ikhuthaza ukuhlangana okuqinile phakathi kwezingxenye zobisi, ithuthukise izakhiwo zokubekwa.
Ithonya le-Ultrasonics ku-Dairy: I-viscosity & I-Rheology, i-Homogeneity, Umsebenzi We-Microbial
Imikhiqizo yobisi ikhiqizwa ngobisi lwesilwane, njengesb. Inkomo, izimvu, imbuzi, inyathi, ubisi lwehhashi noma lwamakamela. Ngemuva kokuvuna, ubisi lungacutshungulwa lube yimikhiqizo ehlukahlukene, njengobisi olwenziwe nge-homogenized kanye ne-skimmed, iyogathi, ukhilimu, ibhotela, ushizi, i-whey, i-casein noma i-powder yobisi. Ubisi lwezinkomo luyinto eluhlaza ebaluleke kakhulu embonini yobisi enomkhiqizo womhlaba wonke wamathani ayi-542,069,000 / ngonyaka. [UGerosa et al. 2012]
I-Whey (i-milk serum) ingumkhiqizo kashizi noma we-casein. Iqukethe ikakhulukazi ama-globinstagers α-lactalbumin (~ 65%), β-lactoglobulin (~ 25%), kanye namanani amancane we-serum albumin (~ 8%) nama-immunoglobins. Amaprotheni we-Whey angamaprotheni we-globular angakhishwa ku-whey.
Ubisi oluyimpuphu lucutshungulwa ngama-spray-dryers ukuze lome futhi luthuthukise ubisi maqondana nokuthola impuphu yobisi eyomile. Ngenxa yokusetshenziswa kwamandla okuphezulu ngokweqile kwama-dryer we-spray, ukuhlunga okuphezulu ketshezi kubalulekile ukukhulisa ukusebenza kahle kwenqubo.
“Amasampula obisi olusha olusha, i-micellar casein, ne-casein powder zenziwa ngo-20kHz ukuphenya umphumela we-ultrasonication. Ngobisi olusha lwe-skim, ubukhulu obumaphakathi bama-globules amafutha asele bancishiswa cishe ngo-10nm ngemuva kwama-60min we-sonication; kodwa-ke, ubukhulu bama-casein micelles babunqume ukungashintshi. Ukwanda okuncane kwamaprotheni we-whey ancibilikayo kanye nokwehla okuhambisanayo kwe-viscosity nakho kwenzeke emizuzwini embalwa yokuqala ye-sonication, okungabangelwa ukuhlukana kwama-proteinin-whey aggregates. Azikho izinguquko ezilinganisekayo kokuqukethwe kwama-casein amahhala okungatholwa kumasampula obisi oluncibilikisiwe anikezwe kuze kube ngama-60min. Ukwehla okuncane, okwesikhashana kwe-pH kubangelwe yi-sonication; kodwa-ke, alukho ushintsho olulinganisekayo lokuhlushwa kwe-calcium encibilikayo. Ngakho-ke, ama-casein micelles obisini olunamafutha amasha azinzile ngesikhathi sokuchayeka ku-ultrasonication. Imiphumela efanayo yatholwa nge-micellar casein eyakhiwe kabusha, kanti izinguquko ezinkulu ze-viscosity zabonwa njengokuqukethwe kwamaprotheni we-whey. Ukusetshenziswa okulawulwayo kwe-ultrasound kungasetshenziswa ngendlela efanele ukubuyisela emuva ukuhlanganiswa kwamaprotheni okwenziwe ngenqubo ngaphandle kokuthinta isimo somdabu se-casein micelles. ” [UChandrapala et al. 2012]
Imiphumela ye-High-Intensity Ultrasound ku-Milk Nutrients kanye ne-Microbial Stability
URazavi noKenari (2020) baphenye ithonya le-high-intensity ultrasound elihlanganisa nenqubo yokwelashwa okushisa okuncane ukukhubaza ama-microbes nama-enzyme okuholela ekonakaleni nasekonakaleni kokuphepha ekudleni. Inhloso yocwaningo lwabo kwakuwukuhlola umphumela wenqubo ye-ultrasound njengenye indlela yokushisa okushisa kakhulu ku-microbial count, i-lipid oxidation njengepharamitha yekhwalithi kanye namavithamini njengezici zokudla okunomsoco wobisi. Imiphumela ikhombise ukuthi i-ultrasound ikwazile ukunciphisa umthamo wobisi omncane futhi yenza ushintsho oluncane kumavithamini kunobisi oluphathwe ngokwelashwa okuvamile kokushisa. Mayelana nalokhu, i-sonication esebenzisa i-probe ye-ultrasonic itholakale iphakeme futhi isebenza kahle kakhulu ku-75% ngamandla. Ukusetshenziswa kohlobo lwe-ultrasound probe ku-55 ° C no-75% umfutho wemizuzu eyi-10 kunconyiwe njengenqubo engeyona eyonakalisayo yokuncishwa ubisi.
I-Industrial 4kW i-homogenizer ye-ultrasonic i-UIP4000hdT ukucubungula ubisi noshizi. Ubisi londliwa ngenqubo eqhubekayo yokugeleza ungene kusiphenduli se-ultrasonic ukuze kuthuthukiswe ukuzinza kwamagciwane, kukhulise ukuvutshelwa koshizi, isivuno kanye nekhwalithi.
Ama-Homogenizers Wokusebenza Okuphezulu Wokukhiqiza Kwe-Cheese
Sicela uxhumane nathi ukuthi ufunde kabanzi mayelana nezici kanye namandla wezinhlelo zethu ze-homogenization ze-ultrasonic. Singajabula ukuxoxa nawe ngesicelo sakho soshizi!
Sicela usebenzise ifomu elingezansi ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nama-processor ethu we-ultrasonic, ukusetshenziswa kwabo ekukhiqizeni ubisi noshizi kanye namanani. Sizojabula ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze i-homogenizer ye-ultrasonic ehlangabezana nezidingo zakho!